Fandraisan'anjaran'i Xqbot - Wikipedia
De Xqbot dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
26 Mey 2022
10:0526 Mey 2022 à 10:05 Fampitahana tant. −6‎ k Sonya 90 ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Iràna ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
10:0526 Mey 2022 à 10:05 Fampitahana tant. −6‎ k Sonia Nemati Serin Torke Khar Azeri Olagh Urmu tabriz ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Iràna ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
25 Mey 2022
02:0925 Mey 2022 à 02:09 Fampitahana tant. 0‎ k Sonya 90 ‎ Rôbô : Fanitsiana fihodinana diso mankany amin'ny pejy tanjona Sonia Zanjan nafindra Marika: Cible de la redirection modifiée
02:0925 Mey 2022 à 02:09 Fampitahana tant. 0‎ k Sonia Nemati Serin Torke Khar Azeri Olagh Urmu tabriz ‎ Rôbô : Fanitsiana fihodinana diso mankany amin'ny pejy tanjona Sonia Zanjan nafindra Marika: Cible de la redirection modifiée
17 Mey 2022
01:3417 Mey 2022 à 01:34 Fampitahana tant. −7‎ k Betioky - Sud ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Betioky ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
15 Mey 2022
08:4715 Mey 2022 à 08:47 Fampitahana tant. 0‎ k West Bengal ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bengaly Andrefana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée Révocation manuelle
14 Mey 2022
11:2314 Mey 2022 à 11:23 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Ihosy ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' Ihosy ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
09:1314 Mey 2022 à 09:13 Fampitahana tant. +1‎ k Toliara II ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' i Toliara II ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
09:1314 Mey 2022 à 09:13 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Toliara Ii ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' i Toliara II ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
13 Mey 2022
05:2313 Mey 2022 à 05:23 Fampitahana tant. +8‎ k Faritra Matsiatra-Ambony ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritra Matsiatra Ambony ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
05:2313 Mey 2022 à 05:23 Fampitahana tant. +8‎ k Haute Matsiatra ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritra Matsiatra Ambony ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
04:5713 Mey 2022 à 04:57 Fampitahana tant. +1‎ k Amoron'i Mania ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritra Amoron' i Mania ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
04:4213 Mey 2022 à 04:42 Fampitahana tant. +1‎ k Toamasina (faritany) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' i Toamasina ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
25 Aprily 2022
12:3625 Aprily 2022 à 12:36 Fampitahana tant. +25‎ k Rotaka tamin'ny taona 2009 ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Krizy ara-pôlitika teto Madagasikara tamin' ny 2009 ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
2 Aprily 2022
13:372 Aprily 2022 à 13:37 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Ambanja ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' Ambanja ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
31 Martsa 2022
14:2031 Martsa 2022 à 14:20 Fampitahana tant. +1‎ k Politika ao Madagasikara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Pôlitika eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
27 Martsa 2022
11:5927 Martsa 2022 à 11:59 Fampitahana tant. −5‎ k Dinika amin'ny mpikambana:Fenerli1978 ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Dinika amin'ny mpikambana:Zafer ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
15 Febroary 2022
02:2115 Febroary 2022 à 02:21 Fampitahana tant. −26‎ k Urbaine Toliara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
12 Febroary 2022
12:5112 Febroary 2022 à 12:51 Fampitahana tant. −4‎ k Helodrano persika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Hoala Persika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
05:3112 Febroary 2022 à 05:31 Fampitahana tant. +1‎ k Oniversite Antsiranana ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Oniversiten' Antsiranana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
05:2912 Febroary 2022 à 05:29 Fampitahana tant. +4‎ k Université de Mahajanga ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Oniversiten' i Mahajanga ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
30 Janoary 2022
19:3430 Janoary 2022 à 19:34 Fampitahana tant. −8‎ k Fivavahana silamo eto Madagasikara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Silamo eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
19:3430 Janoary 2022 à 19:34 Fampitahana tant. −8‎ k Finoana silamo ao Madagasikara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Silamo eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
25 Janoary 2022
16:5925 Janoary 2022 à 16:59 Fampitahana tant. −1‎ k Sonia Zanjan ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Iràna ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
16:5025 Janoary 2022 à 16:50 Fampitahana tant. 0‎ k Kooshk, Iran ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Koushk Marika: Cible de la redirection modifiée
16:5025 Janoary 2022 à 16:50 Fampitahana tant. +1‎ k Koushk, Iran ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Koushk ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
16:5025 Janoary 2022 à 16:50 Fampitahana tant. +1‎ k Kushk, Iran ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Koushk ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
23 Janoary 2022
02:2223 Janoary 2022 à 02:22 Fampitahana tant. −48‎ k Kushk, Iran ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Kushk Marika: Cible de la redirection modifiée
9 Desambra 2021
15:079 Desambra 2021 à 15:07 Fampitahana tant. +4‎ k Lisitry ny renirano eto Madagasikara. ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lisitry ny korian-drano eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
8 Desambra 2021
10:488 Desambra 2021 à 10:48 Fampitahana tant. +1‎ k Midongy Atsimo ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' i Midongy-Atsimo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
10:248 Desambra 2021 à 10:24 Fampitahana tant. +1‎ k Fanambarana Iraisam-pirenena momban'ny Zon'Olombelona ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fanambaràna Iraisam-Pirenena momba ny Zon' Olombelona ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
10:248 Desambra 2021 à 10:24 Fampitahana tant. +1‎ k Fanambarana iraisam-pirenena ny zon'olombelona ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fanambaràna Iraisam-Pirenena momba ny Zon' Olombelona ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
10:238 Desambra 2021 à 10:23 Fampitahana tant. 0‎ k FIZO ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fanambaràna Iraisam-Pirenena momba ny Zon' Olombelona ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
6 Desambra 2021
01:176 Desambra 2021 à 01:17 Fampitahana tant. +2‎ k Liberalisma (kristisnisma) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Teôlôjia liberaly ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:176 Desambra 2021 à 01:17 Fampitahana tant. +2‎ k Kristianisma liberaly ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Teôlôjia liberaly ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:176 Desambra 2021 à 01:17 Fampitahana tant. +3‎ k Jamaïque ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Jamaîka ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:176 Desambra 2021 à 01:17 Fampitahana tant. +1‎ k Jamaica ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Jamaîka ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
2 Desambra 2021
04:112 Desambra 2021 à 04:11 Fampitahana tant. −1‎ k Mpisorona ny mpino rehetra ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Asam-pisoronan' ny mino rehetra ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
04:112 Desambra 2021 à 04:11 Fampitahana tant. −1‎ k Asam-pisoronan'ny mpino rehetra ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Asam-pisoronan' ny mino rehetra ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
26 Novambra 2021
05:0826 Novambra 2021 à 05:08 Fampitahana tant. +1‎ k Dinika:Bokin'i Mormona ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Dinika:Bokin' i Môrmôna ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
05:0826 Novambra 2021 à 05:08 Fampitahana tant. +3‎ k Mormona (Madagasikara) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
05:0826 Novambra 2021 à 05:08 Fampitahana tant. +1‎ k Bokin'i Mormona ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' i Môrmôna ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
11 Novambra 2021
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +2‎ k Taratasy voalohany ho an'ny Korintiana ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +1‎ k Mpisorona ny mpino rehetra ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Asam-pisoronan' ny mpino rehetra Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +2‎ k Kôrintianina volohany ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +2‎ k Korintiana voalohany ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +1‎ k FFKM (fiombonana kristiana) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +2‎ k Epistily voalohany ho an'ny Kôrintiana ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Amparafaravola ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' Amparafaravola ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
01:2511 Novambra 2021 à 01:25 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Ambatondrazaka ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' Ambatondrazaka ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/Xqbot"